UNGATHOLA KANJANI IZANDISO EZINGAPHELELE ZEZINWELE ZAKHO ZEMVELO – SL Raw Virgin Hair LLC.
UNGATHOLA KANJANI IZANDISO EZINGAPHELELE ZEZINWELE ZAKHO ZEMVELO
Julayi 06, 2020
Njengomuntu wemvelo ngezinye izikhathi ufuna ukuzama ukukhanda izinwele okusha, kodwa udinga ubude bezinwele obuningi, ivolumu eyengeziwe noma ngaphansi kwakho konke. Yilapho izandiso zezinwele zingena khona. Ungakwazi ukwengeza izingcezu ezimbalwa lapha nalaphaya ukuze welule izinwele zakho, wengeze ivolumu noma wenze iwigi uzame isitayela esisha. Nokho, njengoba kungokwemvelo, kusenzima ukuthola izandiso zezinwele ezihambisana nohlobo lwama-curl akho. Izinwele zakho zi-kinky, ziyi-coily noma zi-curly futhi aziqondile noma zi-wavy njengoba iningi lazo lithengiswa emhlabeni.
Ngakho-ke, kukhona izandiso ezikhethelwe izinwele zethu ze-afro ngokwemvelo. Lokhu kuhle kithi ngoba ekugcineni singazama ukubukeka okuhlukile esikhundleni sokulinda ukuthi ama-curls akho akhule. Noma, ukugunda zonke izinwele zakho. Ngaphezu kwalokho, basinika ukubukeka okusha ngaphandle kokuzibophezela ngokugcwele ekulondolozeni izinwele. I-SL Raw Virgin Hair ithengisa izandiso zemvelo ezizofanela isabelomali sakho, izidingo nokunambitha.
Basizwile isililo sethu futhi badayisa izilundiso zezinwele zethu zemvelo. Izinwele 100% izinwele ze-Raw Virgin Kinky. Futhi ngenxa yalokho, awekho ama-preservatives, izithasiselo noma amakhemikhali kuwo, ngokungafani nezinye izinhlobo. Ngaphezu kwalokho, ungathenga ukuvala kanye nezinwele uma unquma ukwenza iwigi. Futhi, izinwele zingagundwa futhi/noma zibe nombala ukuze zihlangabezane nezidingo zakho. Kunezinketho ezimbili yilezi:
1. IZINWELE EZIYINTOMBI ELUHLAZA EZINKONZO:
Uma ufuna izinwele ezigoqene ezithambile ezingenazo izihibe, lokhu kukulungele.
amakhoyili aqinile azokunikeza incazelo kanye nevolumu ehambisana nokunyakazisa iwashi futhi uhambe uma izinwele zakho ziwela phakathi kwebanga lezinwele elingu-4a ukuya ku-4c. Ngaphezu kwalokho, iphethini ye-curl ihambisana nobude bezinwele. Ngemva kokugqoka lokhu, uzothola izinkulungwane zokunconywa ukuthi abantu bazithanda kanjani izinwele zakho kuyilapho empeleni kungezona "ezakho". Uma ufuna ukwenza iwigi egcwele, ngakho-ke sincoma ukuthenga i-8oz.
2. IZINWELE ZE-KINKY E-BRAZILIAN:
Njengoba igama liphakamisa, limelela izinwele zakho zemvelo esimweni sokushaywa umoya.
Lokhu kuvamise ukuba yi-voluminous futhi iqonde kancane ukusuka empandeni kuya kumathiphu. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ngisho ukuyiqondisa uma ufuna ukubukeka sleeker. Kanye futhi, engeza ama-curls emaphethelweni ukuze unikeze izinwele "i-oomph" encane. Izinqwaba zingu-3.0 ukuya ku-3.5 oz, lokho kusho ukuthi uzodinga kuphela izinyanda EZIMBILI (ngokungafani nezintathu) ukuze wenze ikhanda lakho lonke.
Ngokufanayo, ekunakekeleni izinwele zakho zemvelo ukunakekela izandiso kuyafana futhi. Qinisekisa ukuhlanza kanye nesimo lapho kudingeka. Futhi, ungachithi ngokweqile ngemikhiqizo ezokala izinwele phansi futhi ibangele ukwakheka. Futhi ekugcineni, ungafaki umbala uma ungeyena uchwepheshe. Lapho unakekela izinwele, zingahlala iminyaka emi-2.
Ngakho-ke, dlulela ngaphambili kwesitolo sethu SL Izinwele Ezingavuthiwe Zezinwele ukuze uthenge namuhla! Futhi ungakhohlwa ukushiya amazwana ukusazisa thina nabanye ukuthi izinwele zethu zimangalisa kangakanani.
Ibhalwe ngu-Ashley Northover